Indlela iSisombululo sequmrhu elongeza ngayo ixabiso kwiiNkqubo zakho zokuThengisa | Martech Zone
Indlela iSisombululo seZiko elongeza ngayo ixabiso kwiiNkqubo zakho zeNtengiso
NgoMvulo, nge-24 kaJanuwari, 2022 NgoMvulo, nge-24 kaJanuwari, 2022 UZara Ziad
Inani elikhulu labathengisi be-B2B - phantse i-27% - bavuma oko idatha engonelanga ibadle i-10%, okanye kwezinye iimeko, nangakumbi kwilahleko yengeniso yonyaka.
Oku kugxininisa ngokucacileyo umba obalulekileyo ojongene nabathengisi abaninzi namhlanje, kwaye oko kukuthi: umgangatho wedatha ombi. Idatha engaphelelanga, engekhoyo, okanye ekumgangatho ophantsi ingaba nefuthe elikhulu kwimpumelelo yeenkqubo zakho zokuthengisa. Oku kwenzeka kuba phantse zonke iinkqubo zesebe kwinkampani - kodwa ngokukodwa ukuthengisa kunye nokuthengisa - zikhuthazwa kakhulu yidatha yentlangano.
Ingaba iphelele, i-360-imbono yabathengi bakho, isikhokelo, okanye ithemba, okanye olunye ulwazi olunxulumene neemveliso, ukunikezelwa kwenkonzo, okanye iindawo zedilesi - ukuthengisa apho kuhlangana khona. Yiyo loo nto abathengisi bebandezeleka kakhulu xa inkampani ingasebenzisi izikhokelo zolawulo lomgangatho wedatha ezifanelekileyo ngokuqhubekayo kwiprofayili yedatha kunye nokulungiswa komgangatho wedatha.
Kule bhlog, ndifuna ukuzisa ingqalelo kweyona ngxaki ixhaphakileyo yomgangatho wedatha kunye nendlela echaphazela ngayo iinkqubo zakho zokuthengisa ezibalulekileyo; emva koko siya kujonga isisombululo esinokubakho kule ngxaki, kwaye ekugqibeleni, siya kubona indlela esinokuyimisela ngayo ngokuqhubekayo.
Eyona Ngxaki yoMgangatho weDatha enkulu ejongene nabaThengisi
Nangona, umgangatho ombi wedatha ubangela uluhlu olude lwemiba yabathengisi kwinkampani, kodwa ukuhambisa izisombululo zedatha kubathengi abayi-100+, owona mcimbi uqhelekileyo womgangatho wedatha esibone abantu bejongana nawo ngulo:
Ukufumana imbono enye yee-asethi zedatha engundoqo.
Lo mba uvela xa iirekhodi eziphindwe kabini zigcinelwe iqumrhu elinye. Apha, igama elithi iqumrhu linokuthetha nantoni na. Ubukhulu becala, kwindawo yokuthengisa, igama elithi iqumrhu lingabhekisa ku: umthengi, ukukhokela, ithemba, imveliso, indawo, okanye enye into ephambili ekusebenzeni kwemisebenzi yakho yokuthengisa.
Impembelelo yeeRekhodi eziPhindwa kabini kwiiNkqubo zakho zokuThengisa
Ubukho beerekhodi eziphindwe kabini kwiiseti zedatha ezisetyenziselwa iinjongo zokuthengisa zinokuba yingozi kunoma yimuphi umthengisi. Xa uneerekhodi eziphindiweyo, zilandelayo zezinye iimeko ezinobuzaza onokuthi ungene kuzo:
Ixesha elichithwe, uhlahlo lwabiwo-mali, kunye nemigudu -Kuba iseti yakho yedatha iqulethe iirekhodi ezininzi zequmrhu elifanayo, unokugqiba ukutyala ixesha, uhlahlo lwabiwo-mali, kunye nemigudu izihlandlo ezininzi kumthengi ofanayo, ithemba, okanye ukukhokela.
Ayikwazanga ukuququzelela amava omntu – Iirekhodi eziphindiweyo zihlala zineendawo ezahlukeneyo zolwazi malunga neziko. Ukuba uqhube amaphulo okuthengisa usebenzisa imbono engaphelelanga yabathengi bakho, unokugqiba ukwenza abathengi bakho bazive bengaviwa okanye bengaqondwanga.
Iingxelo zentengiso ezingachanekanga -Ngeerekhodi zedatha eziphindwe kabini, unokugqiba ukunika umbono ongachanekanga wemizamo yakho yokuthengisa kunye nembuyekezo yabo. Umzekelo, uthumele nge-imeyile iinkokeli ezili-100, kodwa wafumana iimpendulo ezisuka kwi-10 kuphela - inokuba ngama-80 kuphela alawo ali-100 awodwa, kwaye amanye angama-20 ayephindwa.
Ukunciphisa ukusebenza kakuhle kunye nemveliso yabasebenzi -Xa amalungu eqela elanda idatha yequmrhu elithile kwaye afumane iirekhodi ezininzi ezigcinwe kwimithombo eyahlukeneyo okanye ziqokelelwe ixesha elide kumthombo ofanayo, lisebenza njengomqobo omkhulu kwimveliso yabasebenzi. Ukuba oku kuyenzeka rhoqo, ngoko ke kuchaphazela ukusebenza kakuhle kombutho uphela.
Ayikwazanga ukwenza uguqulelo oluchanekileyo -Ukuba urekhode undwendwe olufanayo njengequmrhu elitsha rhoqo xa bendwendwela iziteshi zakho zentlalo okanye iwebhusayithi, kuya kuba phantse akunakwenzeka kuwe ukuba wenze uguqulo oluchanekileyo, kwaye uyazi eyona ndlela ilandelwa ngumtyeleli ekuguqukeni.
Iimeyile eziphathekayo neze-elektroniki ezingathunyelwanga – Esi sesona siphumo sixhaphake kakhulu seerekhodi eziphindiweyo. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, irekhodi nganye ephindwe kabini ikholisa ukuqulatha imboniselo engaphelelanga yequmrhu (kungenxa yoko le nto iirekhodi zigqibele njengokuphinda kwisethi yedatha yakho kwasekuqaleni). Ngesi sizathu, iirekhodi ezithile zinokuba neendawo ezilahlekileyo, okanye iinkcukacha zoqhagamshelwano, ezinokubangela ukuba ii-imeyile zingakwazi ukuhanjiswa.
Yintoni isiGqibo seQumrhu?
Isisombululo sequmrhu (ER) yinkqubo yokumisela xa iimbekiselo kumaziko ehlabathi lokwenyani zilingana (iqumrhu elifanayo) okanye zingalingani (amaziko ahlukeneyo). Ngamanye amazwi, yinkqubo yokuchonga nokudibanisa iirekhodi ezininzi kwiziko elinye xa iirekhodi zichazwa ngokwahlukileyo kwaye ngokuphambanayo.
Isisombululo seQumrhu kunye noMgangatho woLwazi nguJohn R. Talburt
Ukusebenzisa iSigqibo seQumrhu kwiiSeti zakho zeNtengiso
Emva kokubona ifuthe elibi lokuphindaphinda kwimpumelelo yemisebenzi yakho yokuthengisa, kuyafuneka ukuba ube nendlela elula, kodwa enamandla, Ukudityaniswa kwedatha yakho. Apha kulapho inkqubo ye Isisombululo seziko ingena. Ngokulula, isisombululo sequmrhu sibhekisa kwinkqubo yokuchonga ukuba zeziphi iirekhodi ezizeziko elinye.
Ngokuxhomekeke kubunzima kunye nomgangatho womgangatho wedatha yakho, le nkqubo inokuqulatha inani lamanyathelo. Ndiza kukuthabatha kwinqanaba ngalinye lale nkqubo ukuze uqonde ukuba yintoni kanye kanye ebandakanya yona.
Qaphela: Ndiza kusebenzisa igama eliqhelekileyo 'iqumrhu' ngelixa ndichaza inkqubo engezantsi. Kodwa inkqubo efanayo iyasebenza kwaye inokwenzeka kulo naliphi na iziko elibandakanyekayo kwinkqubo yakho yokuthengisa, njengomthengi, ukukhokela, ithemba, idilesi yendawo, njl.
Amanyathelo kwiNkqubo yeSisombululo seQumrhu
Ukuqokelela iirekhodi zedatha yequmrhu ezihlala kuyo yonke imithombo yedatha eyahlukileyo – Eli linyathelo lokuqala nelona libalulekileyo kwinkqubo, apho uchonga khona apho ngqo iirekhodi zeziko zigcinwa. Oku kunokuba yidatha evela kwiintengiso zeendaba zentlalo, i-traffic yewebhusayithi, okanye ichwethezwe ngesandla ngabameli beentengiso okanye abasebenzi bezentengiso. Nje ukuba imithombo ichongiwe, zonke iirekhodi kufuneka zidityaniswe kwindawo enye.
Ukwenziwa kweerekhodi ezidityanisiweyo - Emva kokuba iirekhodi zihlanganiswe kwidatha enye, ngoku lixesha lokuqonda idatha kunye nokutyhila iinkcukacha ezifihliweyo malunga nesakhiwo kunye nomxholo wayo. Iprofayile yedatha ihlalutya idatha yakho kwaye ifumanise ukuba ixabiso ledatha aligqibekanga, alinanto, okanye lilandela ipateni engasebenziyo kunye nefomathi. Ukwenza iphrofayili yedatha yakho kutyhila ezinye iinkcukacha, kwaye kuqaqambise amathuba anokubakho okucoca idatha.
Ukucoca kunye nokulinganisa iirekhodi zedatha -Iprofayile yedatha enzulu ikunika uluhlu lwezinto ezinokuthathwa zokucoca kunye nokulinganisa idatha yakho. Oku kunokubandakanya amanyathelo okuzalisa idatha elahlekileyo, ukulungisa iintlobo zedatha, ukulungisa iipateni kunye neefomathi, kunye nokwahlulahlula imimandla entsonkothileyo kwiinxalenye ezincinci zohlalutyo olungcono lwedatha.
Ukuthelekisa nokudibanisa iirekhodi ezizeziko elinye -Ngoku, iirekhodi zakho zedatha zilungele ukudityaniswa kunye nokudityaniswa, kwaye emva koko ugqibezele ukuba zeziphi iirekhodi ezizeziko elinye. Le nkqubo iqhele ukwenziwa ngokuphumeza ibakala loshishino okanye ubunikazi bokuthelekisa algorithms enokuthi isebenze ngqo kwiimpawu zophawu olulodwa, okanye uthelekiso oluntsonkothileyo kwindibaniselwano yeempawu zequmrhu. Kwimeko apho iziphumo ezivela kwi-algorithm ehambelanayo azichanekanga okanye ziqulethe ii-positives zobuxoki, unokufuna ukulungisa i-algorithm okanye uphawule ngesandla iimatshisi ezingachanekanga njengeziphindaphindo okanye ezingezizo.
Ukuphumeza imithetho yokudibanisa amaqumrhu kwiirekhodi zegolide -Kulapho ukudibanisa kokugqibela kwenzeka khona. Mhlawumbi awufuni kuphulukana nedatha malunga nequmrhu eligcinwe kuzo zonke iirekhodi, ngoko eli nyathelo limalunga nokuqwalasela imithetho yokuthatha isigqibo:
Yeyiphi irekhodi eyiyeyona iphambili kwaye ziphi iikopi zayo?
Zeziphi iimpawu ezivela kwiimpinda ofuna ukuzikhuphela kwirekhodi eliphambili?
Nje ukuba le migaqo iqwalaselwe kwaye iphunyezwe, isiphumo siseti yeerekhodi zegolide zamaziko akho.
Ukuseka iNkqubo-sikhokelo yeSisombululo seQumrhu eqhubekayo
Nangona siye sahamba ngesikhokelo esilula ngesinyathelo sokusombulula amacandelo kwidathasethi yokuthengisa, kubalulekile ukuqonda ukuba oku kufuneka kuthathwe njengenkqubo eqhubekayo kwintlangano yakho. Amashishini atyala imali ekuqondeni idatha yawo kunye nokulungisa imiba yomgangatho wayo ongundoqo amiselwe ukukhula okuthembisayo ngakumbi.
Ukuphunyezwa ngokukhawuleza nalula kweenkqubo ezinjalo, unokubonelela ngabasebenzisi bedatha okanye abathengisi kwinkampani yakho ngesoftware yesisombululo sequmrhu ekulula ukuyisebenzisa, enokubakhokela kumanyathelo akhankanywe ngasentla.
Ngokugqibeleleyo, singatsho ngokukhuselekileyo ukuba i-dataset ephindwe kabini isebenza njengomdlali obalulekileyo ekwandiseni i-ROI yemisebenzi yokuthengisa kunye nokomeleza isidima sophawu kuwo onke amajelo okuthengisa.
tags: inguquko yophawuukuchaneka kwedathamgangatho wedathaukudityaniswaizinto ezahlukeneyoiirekhodi eziphindiweyoimpindaiqabaneIsisombululo sezikoeriiseti zedatha zentengisoingxelo yentengisointo efanayoYintoni i
UZara Ziad ngumhlalutyi wentengiso yemveliso kwi Ileli yeDatha ngemvelaphi kwi-IT. Unomdla wokuyila isicwangciso somxholo wokudala esibonisa imiba yococeko lwedatha yangempela ejongene nemibutho emininzi namhlanje. Uvelisa umxholo wokunxibelelana nezisombululo, iingcebiso, kunye nezenzo ezinokunceda amashishini ukuba aphumeze kwaye afezekise umgangatho wedatha yendalo kwiinkqubo zabo zobukrelekrele beshishini. Uzama ukwenza umxholo ojoliswe kuluhlu olubanzi lwabaphulaphuli, ukusuka kubasebenzi bobugcisa ukuya kumsebenzisi wokugqibela, kunye nokuwuthengisa kuwo wonke amaqonga edijithali.
Kutheni iNtengiso kunye namaQela e-IT kufuneka abelane ngoXanduva lwe-Cybersecurity